Ahoana no ahitanao ireo talenta miafina na dia mieritreritra aza ianao fa tsy manana - Blog
Ahoana no ahitanao ireo talenta miafina na dia mieritreritra aza ianao fa tsy manana
Te hamaha ireo talenta miafina ao aminao ve ianao?
Eo ry zareo - matokia ahy.
America's Efa Nahazo talenta
Marina izany. Ianao no kintana sy mpandresy amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra malaza anao. Manana talenta ianao, na mahatsapa izany na tsia.
Ireo talenta ireo dia mety tsy dia takona afenina loatra - ny sasany miafina amin'ny alàlan'ny tsy fahatokisan-tena sy ny tsy fahatokisan-tena fotsiny.
Miandry ny famotsorana azy ireo ry zareo…
Mety ho sarotra ny mamantatra ny tena fahaizanao, indrindra rehefa toa mahafantatra tsara ny zavatra ataony amin'ny fiainany ireo manodidina anao!
firy taona i john cena
Raha sahirana mitady ny talentanao ianao, dia manana torohevitra tsara hanampy anao izahay…
Voalohany, mila mivoaka ianao ary manandrama zava-baovao!
Raha tsy misy na inona na inona ataonao amin'izao dia miantsoantso anao ho talenta mendrika dia tonga ny fotoana hanaovana andrana kely.
Matetika isika no variana amin'ny fiainantsika andavanandro ka sarotra ny mieritreritra zavatra ataontsika izay tena tena haintsika.
Mahatsapa ve ianao fa mihitsoka ao anaty roti ary tsy misy zavatra ataonao izay mahaliana na mahaliana?
Arakaraka ny maha-mahazatra anao ny hetsika iray dia vao mainka mahatsapa ho kivy sy tsy mahazo aingam-panahy ianao.
Jereo ao amin'ny kilasy eo an-toerana - raha misy oniversite eo amin'ny fiaraha-monina na toerana ianarana eo akaikinao dia azo antoka fa misy karazana taranja asa azonao idirana.
Andramo ny tananao amin'ny seramika, kilasy fanaovana sary, na atrikasa fakana sary.
Raha aleonao manao zavatra ara-batana bebe kokoa, maninona raha miditra amin'ny ekipa fanatanjahan-tena eo an-toerana? Tsy mila manana endrika ara-batana tsy mampino ianao na manana fahalalana lehibe momba ny fitsipiky ny basikety, mila vonona fotsiny ny ho tafiditra ao ianao.
Tsy fantatrao mihintsy, mety hanjary manana talenta fitifirana miafina ianao ary ho mpamono olona ambony manaraka!
Tsindrio ny Internet ary jereo ny tanjon'ny olon-kafa. Ho gaga ianao amin'ny habetsahan'ny aingam-panahy azonao atao amin'ny Instagram sy Pinterest - tsy ny selfie sy ny sary fisakafoanana rehetra.
Amin'ny fikarohana ireo fialamboly vaovao, dia mety hahita zavatra mifanaraka aminao ianao.
Raha tsy izany dia ianao koa nahafinaritra be Mandritra izany fotoana izany na ianao tantara mampihomehy hizara amin'ny namanao…
Anontanio ireo olon-tianao
Mety ho tena sarotra ny mahita ny tenanao amin'ny tena jiro, ka mendrika ny manontany an'ireo izay mahalala anao indrindra.
Miresaka amin'ny olona akaiky anao sy azonao atokisana. Angataho izy ireo hilaza aminao izay heveriny fa tsara vitanao ary avy eo.
Mety holazain'izy ireo aminao ny zavatra efa fantatrao, fa mety ho gaga koa ianao.
Mety ho tadidin'ny ray aman-dreninao ny fialam-boly nanananao fony ianao zatovo adinonao.
Ny namana akaiky dia mety hampahatsiahy anao fa te ho mpihira na mpandihy ianao taloha. Ny namana dia mahita hatrany ny lafy tsara eo amin'ny samy izy, ka mety hahita zavatra vaovao momba anao ianao mandritra izany.
Ny fomba fahitan'ny olon-kafa anao dia matetika no marina kokoa noho ny fahitanao ny tenanao, noho izany dia mety hisy hevitra vaovao vaovao hiseho.
Ny fananana talenta amin'ny zavatra dia midika zavatra samy hafa amin'ny rehetra.
Ho an'ny ankamaroany dia midika hoe 'mahay' amin'izany.
Inona anefa no tena dikan'izany?
Subjektiva loatra ny zavakanto ka tsy azo atao ny milaza hoe iza no 'tsara' na 'ratsy'.
Ary afaka manana talenta amin'ny zavatra iray ianao amin'ny fomba fijerin'ny amateur nefa tsy mila na te-hanao izany asa izany.
Inona ianao afaka mianatra avy amin'izany fa ny fientanam-po dia tena manandanja be.
Ny talenta dia tsy momba ny vokatra farany fotsiny, fa ny fizotrany sy ny eritreritra ary ny fahatsapana napetrakao tamina zavatra iray.
Ny fientanam-po dia ampahany lehibe amin'ny talenta, ary matetika no hadinontsika fa rehefa miezaka mafy mitady zavatra isika dia afaka manao tsara.
Eritrereto ny herinao
Ny ankamaroantsika dia mila fialamboly na fahaizana izay tsy misy ifandraisany amin'ny asantsika.
Raha mandany tontolo andro any am-piasana ianao amin'ny fanaovana takelaka, dia mety ho talenta tsara ianao amin'izany. Midika ve izany fa tianao ny formulas Excel ho talentanao miafina?
Tsia, tsia angamba.
Midika ve izany fa azonao atao ny mampiasa an'io fahaiza-manao napetraka any an-toeran-kafa io ary hamadika azy ho filana?
Atsangano ny fahaizanao efa misy ary ampitao amin'ny zavatra hafa. Mety ho hitanao fa ny fahaizanao mandamina ao amin'ny birao dia mahatonga anao ho mpitantana hetsika tsy mampino.
Ny maha-mpitarika ekipa anao amin'ny asa fisotroana dia mety ho nanomana anao tamin'ny famokarana teatra (mpankafy na hafa) - tabataba, tarehin-tsoratra maro loko, ary fahaiza-manao mahavita zavatra rehefa mifindra hariva be atao?
Miezaha mamerina ny fahaizanao ankehitriny ary ampiasao izany mba hanomezana hery anao ho fialamboly vaovao. Ho gaga ianao amin'ny zavatra lehibe maro azonao atao!
Avy eo, tranga mitady fomba hampamirapiratra an'io talenta io…
Inona no azonao atao tsara kokoa noho ny 99% amin'ny mponina?
Ity dia mampifandray amin'ny filalaovana ny herinao, ary koa ny famaritana hafa ny teny hoe 'talenta.'
Ny olona sasany dia maniry talenta mamela azy ireo hijery ny lafiny famoronana, na ho sahy sy hahaliana kokoa.
Ny sasany amintsika dia manaraka talenta ahafahantsika mahazo vola, izay faniriana mitombina tanteraka ihany koa.
Raha manandrana manararaotra ny fahaizanao efa misy ianao dia mila mieritreritra momba ny akany. Inona no tsara kokoa noho ny ankamaroan'ny olona fantatrao?
Eo indray no resahina ny miresaka amin'ny namana akaiky sy fianakaviana. Mety tsy ho tsapanao izany, fa ny zavatra sasany ataonao amin'ny fiainanao isan'andro dia tena fanamby lehibe ho an'ny olon-kafa.
Mikarakara mariazy? Ho anao, tsio-drivotra ary mahazo aina ianao amin'ny earpiece sy clipboard ka tsy azonao an-tsaina ny fiainana raha tsy misy azy ireo. Ho an'ny sasany, ny fifampiraharahana amin'ny Bridezilla, voninkazo afovoany ary ny dilemma ‘trondro na akoho’ no nofy ratsy indrindra nataon'izy ireo.
Mieritrereta momba ireo zavatra ataonao izay tsy azon'ny olon-kafa, na tsy hatao ary miasa any. Mitadiava fomba hivarotana ny tenanao amin'ny maha-manam-pahaizana anao ary ataovy miasa ho anao ny talentao!
Mihainoa ny tenanao
Eritrereto ilay zavatra izay mampihetsi-po ny fonao ary manome anao lolo.
Ilay zavatra maharary anao ao anaty satria ilainao amin'ny fiainanao izany.
Mety mieritreritra ny olon-tianao ianao, na ny pizza (!), Dieny izao, fa atosohy aloha io.
Inona koa no misy?
Mahazo misintona tampoka ao an-kibonao ve ianao, rehefa maheno olona mitendry gitara?
Moa ve ny fieritreretana ny fanoratanao ny tantaranao manokana dia mamela anao hahatsapa fientanentanana sy tahotra ary feno fanantenana?
Enjeho izany fahatsapana izany ary fantaro raha zavatra tena azonao atao ny manenjika.
Mety hanana lesona gitara iray ianao ary halanao, na mety ho voajanahary tanteraka ianao. Na izany na tsy izany dia nanaraka ny fonao ianao ary nitady lalana vaovao.
Ny fihainoana izay irin'ny fanahinao dia mety ho sarotra indraindray. Sahirana amin'ny asa ianao ary efa sahirana mandroso ny finamanana, ny fifandraisana ary ny kilasy fanaovana gym isan-kerinandro.
Ny fijerena an'i Netflix sy ny fikororohana fahatsiarovan-tena ao amin'ny telefaoninao dia mety handray izany rehefa ianao Aza mahazo fotoana malalaka, ka sarotra ny hahafantatra izay tena eritreretinao sy tadiavinao.
Amin'ny manaraka manana andro fialantsasatrao ianao, mipetraha, mifikitra amin'ny rakikira tsara sy hevitra ati-doha.
Omeo efitrano fandraisam-bahiny ianao mba hieritreretana sy hanodinana azy, ary mihazakazaha amin'izay eritreritra rehetra tonga.
Raha misy manohy mikotrika dia enjeho izy. Tena.
Fantatry ny fonao ny zavatra tadiaviny, ary izany no fomba tsara hitarihana ny talenta miafina manaraka anao hiseho…
Mbola tsy azonao antoka hoe inona ny talentanao? Tsy azonao antoka ny fomba hahitana azy ireo? Miresaha amin'ny mpanazatra fiainana anio izay afaka mitarika anao mandritra ny fizotrany. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
Zavatra 10 tokony halahelo eo amin'ny fiainana
Ireo karazan-tsaina 9: Fantaro ny fomba hampitomboana ny anao
jamie avy amin'ny podcast an'i joe rogan
maha-zava-dehibe ny fiasana ara-potoana
inona ny filanao amin'ny fiainana
floyd mayweather vs ilay seho lehibe